Zodiac nke Septemba 26 - roscodị Horoscope zuru ezu - Akara Zodiac
Isi Akara Zodiac Septemba 26 Zodiac bụ Libra - roscodị Horoscope zuru ezu
Septemba 26 Zodiac bụ Libra - roscodị Horoscope zuru ezu
Akara zodiac maka Septemba 26 bụ Libra.
Akara Astrological: Akpịrịkpa . Ọ na-anọchi anya ndị amụrụ n’agbata Septemba 23 na Ọktọba 22 mgbe Anyanwụ dị na Libra. Ihe nnọchianya a na-egosi omume ziri ezi na nke omume nke ndị a.
Ihe Libra Constellation bụ otu n'ime kpakpando iri na abụọ nke zodiac, tinye n'etiti Virgo na West na Scorpio na East na mpaghara 538 sq degrees, na-enweghị kpakpando ịdị ukwuu mbụ na latitude ndị kachasị ahụ anya + 65 Celsius -90 Celsius.
Ndị Spanish na-akpọ ya Libra ebe ndị Greek na-akpọ aha Zichos maka akara zodiac nke Septemba 26 mana ezigbo mbido Scales dị na Latin Libra.
Ntughari uzo: Aries. Nke a bụ akara aka gafee zodiac gburugburu site na akara Libra zodiac. Ọ na-egosi ọbụbụenyi na nchekwube ma a na-atụle abụọ ndị a ka ha nwee mmekọrịta mmekọrịta dị ukwuu.
Usoro: Cardinal. Nke a nwere ike ịkọwapụta nnwere onwe na mmesapụ aka dị na ndụ nke ndị amụrụ na Septemba 26 na etu ha siri kpachapụ anya.
Ulinglọ ụlọ: Lọ nke asaa . Symbolọ a na-egosipụta mmekọrịta chiri anya, nke dị iche na nke ụlọ egotistic nke onwe. Ma ọ na-ekwu maka di ma ọ bụ nwunye ma ọ bụ mmekorita azụmahịa nke a bụ mgbanwe ntụgharị uche na ndụ Libra.
Isi na-achị: Venus . E kwuru na ahụ nke eluigwe a na-emetụta mmetụta ịhụnanya na mmụọ dị elu. Ọ dịkwa mkpa site na nhọta. Venus na-anọchite anya ike nwanyị na-emegide ike nwoke nke Mars.
Mmewere: Ikuku . Ihe a na-egosi n'echiche nke ịdị adị na ịkpachara anya na ndụ nke ndị amụrụ n'okpuru akara zodiac nke Septemba 26 wee kpebie ya ịmatakwu na itinye aka. N'ikwekọ na mmewere ụwa, ikuku yiri ka ọ na-anyụ anyụ ma ọ bụ tinye n'ime ya.
Bọchị obi ụtọ: Wenezde . Dimbọchị a dị nro maka ndị amụrụ n'okpuru Libra bụ nke Mercury na-achị na-egosi mkparịta ụka na nnwere onwe.
Onu ogugu: 3, 7, 13, 17, 22.
Motto: 'Ana m edozi!'
Ozi ndi ozo na Septemba 26 Zodiac n'okpuru ▼
Mars na Nwoke Taurus: Mara Ya nke ọma
South Node na Leo: Mmetụta na mmadụ na ndụ
ihe akara bu oct 3
otu esi eme ihe aquarius di na akwa
aquarius nwoke aquarius nwanyị hụrụ ndakọrịta
pisces nwoke gemini nwanyi di na nwunye
Kedu ihe akara zodiac maka February 22
ihe na-eme nwoke sagittarius